Isniin, April 11, 2016 Tuesday, April 12, 2016 Douglas Karr
Waa iga yaabis intee in le’eg ayay shirkadaha shaqo ee adag geliyaan istiraatiijiyad ka kooban iyagoon weligood eegin boggaga iyo bogagga tartamaya Uma jeedo tartamayaasha ganacsiga, waxaan ula jeedaa tartamayaasha raadinta dabiiciga ah. Isticmaalka aalad sidaSemrush, shirkad ayaa si fudud u sameyn karta falanqeyn tartan ah oo udhaxeysa boggooda iyo goobta lagu tartamayo si loo aqoonsado shuruudaha u horseedaya taraafikada tartame taas oo ah, taas bedelkeeda, inay u horseedo bogooda. In badan oo idinka mid ah ayaa laga yaabaa inay fekerayaan
Khamiis, May 30, 2013 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waxaan haynaa waxoogaa faahfaahin ah oo la mid ah oo ku saabsan geeddi-socodka suuq-geynta, nidaamka deegaanka ee suuq-geynta, kororka suuq-geynta gudaha iyo xitaa faahfaahinta ku saabsan koritaanka qarxa ee suuq-geynta gudaha. In kasta oo suuq-geynta gudaha ay diirada saareyso helitaanka hogaaminta iyada oo loo marayo dadaalkaaga suuq-geynta dijitaalka ah, kani waa faahfaahin muuqaal ah oo laga keenay Pixaal, Waa maxay Suuq-geynta Dijital ah? Waa macluumaad wanaagsan, laakiin suuqgeynta dhijitaalka ah waxay leedahay dhowr waxyaalood oo kale - suuqgeynta fiidiyowga, loogu talagalay Naqshadeynta Waxqabadka,
Markii ugu horraysay ee aan arko maqaar qabow oo kujira laptop-ka, waxay ahayd Jason Bean astaantiisa waxtarka leh ee maqaarka laptop-kiisa. Waxay ka dhigeysaa inuu ka dhex muuqdo badweynta laptop-yada oo laga arki karo qolka shirarka oo dhan. Waxaan go aansaday inaan naqshadeeyo maqaarkayga MacBookPro waxaanan dhex maray boggaga internetka ka hor inta aanan helin mid fudud oo la isticmaali karo oo si buuxda loo habeyn karo. Goobta aan go'aansaday waxay ahayd Skinit.